Global Voices teny Malagasy » Ny Tantara Ambadiky ny Lahatsary [Hosoka] Nisamborana an’i Morsi · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Jolay 2013 19:02 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Nisy lahatsary  nampiseho izay nolazalazaina ho fisamborana ny filoha ejipsiana teo aloha Mohamed Morsi mitety ny aterineto amin'izao fotoana izao. Efa nisy namoaka tamin'ny YouTube tamin'ny 21 mey 2013 ihany io lahatsary notononina io  ka nitondra ny lohateny hoe “Ny fotoana nisamborana ny filoha Mohamed Morsi sy ny zanany lahy.”
Voaongan ‘ny [mg] miaramila ejipsiana androany [ 4Jolay] Morsi rehefa nanao ny fanompoana mahafiloha azy nandritra ny herintaona. An-tapitrisany ny olona nivory nanerana an'i Ejipta hatramin'ny 30 jona, tsingerintaona voalohany nitondrany, ka nitakiana ny hialany — sy ny antokony Mpirahalahy Miozolomana — eo amin'ny fahefana. Nanendry ny filoha vonjimaika ny tafika ejipsiana androany, nampihantona ny lalampanorenana ary nampanantena fa hatao tsy ho ela ny fifidianana filoha sy solombavambahoaka.
Ny lahatsary vaovao, nitondra ny lohateny hoe “Ao amin'ny lahatsary,fisamborana an'i Morsi”, no nisy namoaka tao amin'ny YouTube  ary nanomboka tamin'ny fifandresen-dahatry ny olona [ar] milaza fa tokony ametahana roovy “izy” ary “karakaraina tahaka ny fikarakara jiolahy hafa.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/07/04/49834/
 lahatsary notononina io: https://www.youtube.com/watch?v=aZCmFj72UOE
 @iyad_elbaghdadi: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/iyad_elbaghdadi/status/352535934526427136